Meeshaalee dooniiwwan irratti kuufaman ofumaa akka kaasaniif namootii dhuunfaaf heeyyamni kenname – ዜና ከምንጩ
Meeshaalee dooniiwwan irratti kuufaman ofumaa akka kaasaniif namootii dhuunfaaf heeyyamni kenname
-Meeshaalee dooniiwan irratti kuufaman kaasuudhaaf yoo xiiqqaate koonteeyinarri duuwwaa kuuma 13 nibarbaachiisa jadhameera
Hanqinni koonteeyinarii ol’aanaan waan mudateefi kiraan Dooniitis waan dabaleef meeshaalee buufatawwan Chaayinaa gara garaa irratti kuufaman namoonni ofumaaf akka kaasaniif heyyamni akka kenname dhaabbanni tajaajila loojistiiksiifi geejiba galaanaa himeera.
Sababoota rakkoon koonteeyinaraa akka babal’atu taasisan keessaa tokko baay’inni fe’iinsa Chaayinaa irraa gara Ameerikaafi Awurooppaa kaabaatti geeffamu waan dabalaa dhufeef akka ta’e eerameera.Karaa birootiin weerarri COVID-19 sadarkaa idila addunyaatiin babal’ate akka sababaatti kan eeramu akka ta’e daayireektarri dhimmoota komunikeeshinii dhaabbata tajaajila loojistiiksiifi geejiba galaanaa Ashabbir Noottaa Addis Maaladaatti himaniiru.
Kana malees hanqinni koonteeyinara duwwaa kun daldala galiifi ba’ii biyya keenyaa qofa irratti utuu hintaane sochii daldala idil addunyaas kallattiifi al-kallattiin dhiibbaan uume ol’aanaadha jedhaniiru.
Sababiin biraa rakkoo kana hammeesse waqtii gannaa akka ta’e kan eeran Ashabbir waqtiin gannaa kun sochiin daldala aduunyaa kan itti bal’atu waan ta’eef dhiibbaa gamasaa qaba jedhan.Waqtii gannaa kanatti sochiin daladalaa dachaa afuriifi shaniin waan dabaleef rakkoon kun wal xaxaa akka ta’uuf shoora gumaachuusaas daayireektarichi himaniiru.
Meeshaalee buufata irratti kuufaman kaasuuf xiqqaadhumatti dhaabbatichi koonteeyinara duwwaa kuma 13 caalu argachuu qaba jechuunis himan.
Walqabsiisuuni buufanni Chaayinaa rakkoon itti heddummate meeshaan galii kan itti dhufu akka ta’e himuun iddoowwan birootti rakkoon kun akka hinmul’anne eeraniiru.Rakkoon kun erga uumamee booda abbootiin meeshaa Itiyoophiyaa kallattiins ta’e al-kallattiin komii dhageessisaa akka turan dhaabbatichi beeksiseera.
Rakkoo kasaaraa ergitootaafi fichisiiftoota irratti mudachuu danda’u hanbisuuf namoonni tooftaa isaaniif mijaawaa ta’een buufata irraa meeshaa isaanii akka kaasaniif heyyami kennameera jedhameera.
Heyyamni kun ol’aantummaadhaan dhaabbatichi meeshaawwan buufata irraa kaasuuf humna dhabuusaatiin namoonni ofumaa Dooniifi Koonteeyinara kireeffachuudhaan akka kaasaniif beekkamtii kenname akka ta’es eeraniiru.
Gama Kanaan maamiltoonni hedduun akkaataa heyyama dhaabbaticha irraa argataniin buufata irraa meeshaasaanii kaasaa akka jiran daayireektarichi beeksisaniiru.Karaa birootiin kallattii furmaataa dhaabbatichi rakkoo kanaaf kaa’e keessaa akkuma haala jiruutti dursi kennamuun meeshaan buufata irraa kaafamu akka jirus himameera.
Fakkeenyaaf buufata irra waan turaniif tajaajilaan ala ta’uu kan danda’an kan akka dawaa,nyaataafi kanneen fakkaatan shaqaxoonni adda addaa dursi kennameefii akka kaafaman taasifama jedhameera.
Rakkoo kanatti fala barbaaduuf dhaabbatichi koonteeyinaroota qabu hunda gara iddoowwan meeshaaleen itti kuufamanitti bobbaasaa akka jirus daayireektarichi eeraniiru.
Kana malees buufatawwan Chaayinaa rakkoon kun itti heddumatetti dhaabbatichi Dooniiwwan isaafi kireeffatetti fayyadamuudhaan saffisa ol’aanaadhaan kuufama meeshaa jiru hir’isaa akka jiru ibsaniiru.
Hojii kana daran cimsuunis meehaa kuufamee jiru hanga walakkeessaa Hagayya bara 2013’tti xumuruudhaan buufata irraa kaasuuf hojjechaa akka jirus himan.
Oduu walqabatee jiruun waqtii rakkisaa kanatti dhiibbaa idil addunyaa hunda bira darbuudhaan bara bajataa kana keessa koonteeyinara kuma 170 kaasuuf karoorfate keessaa kuma 150 kaasuudhaaniifi karoorasaa milkeessuun bu’aa qabatamaa galmeessiseera jedhan.
Akka Ashabbir himanitti,dhaabbatichi kan hafan karoora waggaa keessatti kan qabamaniifi sababa ibsameen meeshaalee buufata dhaqqabanii hinkaafamne kaasuudhaan,akkasumas waqtii gannaatti meeshaaleen jiran saffisaan akka ka’an taasisuun xumura baatii Hagayyaa irra gara hojiisaa idileetti deebi’a.
Akka daayireektarichi jedhanitti rakkooleen idil addunyaa hojii dhaabbatichaa irratti dhiibbaa uuman mudatanis dhaabbatichi humna ofii qabuufi bakka bu’ootasaa Doonii qabanitti fayyadamuun tajaajila qindaa’aafi barbaachisaa ta’e maamiltoota isaatiif utuu addaan hinkutin kenneera.Kanaanis sochii diinagdee biyyaa irratti rakkoon utuu hinmudatin shoora gamasaa kan itti gumaacheefi waqtiin kunis dhaabbatichi ga’uumsa tajaajila kenuuf qabu kan itti mul’ise akka ture dubbataniiru.
አዲስ ማለዳ 10 Adoolessa 2013 No 4
Total views : 5876621